Iskaashi Istiraatiijiyadeed oo lala yeesho IGDORE - AfricArXiv
Published by Jo Havemann on 18th April 2019 18th April 2019
Waxaan si sharaf leh u shaacinaynaa in AfricanArXiv ay la gashay iskaashi istiraatiiji ah Machadka Caalamiga ah ee Cilmi-baarista Furan iyo Waxbarashada (IGDORE) - machadka cilmi baarista madaxa banaan ee loogu tala galay loo hagaajiyo tayada sayniska, waxbarashada sayniska, iyo tayada nolosha saynisyahano, ardayda iyo qoysaskooda.
IGDORE waxaa ka go'an in dhaqamada cilmiga ah ee furan, lacag la’aan (libre) iyo saynis furan, iyo saynis caafimaad iyo caalami ah iyo waxbarasho sare, oo ujeedadeedu tahay in la ilaaliyo ubaxyada sayniska iyo in la baro oo la tababaro laxiriirta saynisyahano dibadeed iyo ardayda habdhaqanka sayniska ugu fiican.
Saynisyahano u hogaansan dhaqamada cilmiga ah ee furan noqon kara ku xiran la IGDORE oo ay ku soo biiraan baarayaashan 43-ka ah ee hadda xiriirka la leh ee shaqadoodu tahay qiyaastii 20 edbinta cilmiga ah oo ku nool wax aan ka yarayn 23 waddan oo adduunka ah.
Isu-duweyaasha AfrikaArXiv, Justin Sègbédji Ahinon iyo Jo Havemann waa labadoodaba IGDORE cilmi baadhayaasha xiriirka la leh. Jo Havemann ayaa dhawaan ku soo biiray IGDORE Gudiga Maareynta Caalamiga.
Si aad waxbadan uga sii ogaato gal igdore.org.